“Ma jirto wax la yidhaahdo Awdal State oo gobolka Awdal laga yaqaanaa” | Somaliland.Org
“Ma jirto wax la yidhaahdo Awdal State oo gobolka Awdal laga yaqaanaa”
March 29, 2012	Boorame (Somaliland.Org)-Badhasaabka Gobolka Awdal Axmed Xaddi Sidci,ayaa sheegay inaan deegaamadda Gobolka Awdal laga aqoon wax la yidhaahdo Awdal State, waxaanu si adag u beeniyay war ay baahiyeen qaar ka mid ah Mareegaha Internet-ka iyo Wargeyska WAAHEEN oo sheegay in laba sarkaal oo ka tirsan ciidanka qaranka kooxda Awdal state ka afduubatay magaaladda Gabiley dhawaan.
Badhasaabka Gobolka Awdal Axmed Xaddi Sidci wuxuu sidaasi ku sheegay shir jaraa’id oo uu maanta ku qabtay xafiiskiisa, waxaanu sheegay inuu la yaabay war lagu baahiyay wargeyska WAAHEEN iyo mareegaha Internet-ka qaarkood. “Laba nin oo saraakiil ah oo ka tirsan ciidank qaranka iyo askari ay wateen ayaa tagay agagaarka tuuladda Geed-diqsi oo bari ka xigta degmadda Dilla. Sadexdan nin oo hubaysan isla markaana laba dhar cad xidhan yihiin waxa ka shakiyay dadweynihii deegaankaasi waxaanay moodayeen dad u socda inay falal nabad-gelyo darro. Ka dibna dadkii ayaa qabtay. Markaa sadexdaasi nin waa la sii daayay laakiin waxay meesha ka abuuri gaadheen falal amni darro waayo deegaankaasi waa xasaasi waxa suurto gal ah inay dilaan dadka hubaysan ee aanay garanayn. Lama garanayo waxay sadexdaas nin oo reer Gabiley ahi u socdeen illaa imika,”ayuu yidhi Axmed Xadi Sidci.
Badhasaabku wuxuu sheegay in sadexdan nin dadkii qabtay ay qoryihii ka qaadeen hase yeehsee ay maamulka degmadda Dilla ka soo qaadeen laba qori. Halka kii sadexaadna ay raadinayaan.
Axmed Xadi Sidci waxa uu saxaafadda ugu baaqay iska hubiyaan xaqiiqadda wararka ay baahinayaan, waxaanu intaas ku daray inay wargeyska Waaheen ka sugayaan inuu soo caddeeyo warkaas uu qoray oo uu ku sifeeyay mid been abuur ah.
Badhasaabka Awdal waxa kale oo uu ka deyriyay abaar baahsan oo ka jirta deegaamadda gobolka Awdal waxaanu xukuumadda, Ha’yadaha samo falka iyo dadweynaha Somaliland-ba ugu baaqay in gurmad deg deg ah lala gaadho dadka ku tabaaloobay abaar ka jirta degmooyinka gobolkaasi.
Previous PostUrurka WADANI oo noqday Ururkii u horeeyay ee Iclaamiya xiliga uu qabspoomayo shirweynahoodiiNext PostXaflad qaadhaan loogu ururinayo Biyo xidheen Korontadiisa la soo gaadhsiinayo Somaliland	Blog